KEDU ESI EWEPU ZIP IJI MELITE - LINUX - 2019
Nsogbu na msvcr110.dl bụ ndị metụtara C C ++. Onye mmemme na-eji ya maka mkpa ha. Njehie merenụ ma ọ bụrụ na ngwanro ahụghị DLL na usoro ahụ ma ọ bụ maka ihe kpatara ya anaghị edebanye aha na ndekọ ahụ. Ma, ọtụtụ mgbe, ọ naghịzi agụ akwụkwọ. Ihe kpatara arụmọrụ ahụ nwere ike ịbụ nchịkọta nwụnye ezughị ezu wepụtara site na iyi tracker. "Repackers" na - ebelata onye nhazi ahụ na olile anya na onye ọrụ etinyelarịrị anya C + C dị mkpa. Ya mere, ụdị nchịkọta dị otú ahụ anaghị enwekarị ụlọ akwụkwọ nchịkwa ndị dị mkpa maka ọrụ.
Mgbe ụfọdụ, ndị na-enweghị ikikere egwuregwu na-agbanwe DLL, ka ha kwụsị ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Tupu ịmalite ịchọta faịlụ ahụ na-efu, lelee quarantine antivirus. Ma eleghị anya ọbá akwụkwọ ahụ dị.
N'ihe banyere msvcr110.dll, anyị nwere ngwọta atọ maka nsogbu ahụ. Nke a na-eji onye ahịa DLL-Files.com, wụnye ngwugwu Redistributable C + 2012 na iṅomi aka. Nhọrọ nke mbụ ga-achọ nkwụnye ngwa ngwa, ma abụọ ndị na-esonụ nwere ike n'efu n'efu.
Usoro a na-ewe DLL site na ebe nrụọrụ weebụ ma tinye ya na kọmputa.
Iji onye ahịa maka msvcr110.dll:
Tinye n'ime akara msvcr110.dll.
Pịa bọtịnụ ahụ "Mee nyocha."
Pịa na aha faịlụ.
Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịwụnye mbipute dị mkpa nke DLL. Iji mee nke a, ị ga - achọ:
Setị onye ahịa ahụ n'ụdị pụrụ iche.
Họrọ nhọrọ msvcr110.dll wee pịa "Họrọ nsụgharị".
Ihe na-esonụ bụ nhọrọ ịwụnye na nchekwa ahụ. Hapụ ụzọ ndabara.
Gbanwee ụzọ nke msvcr110.dll.
Push "Wụnye Ugbu a".
Ngwa ahụ ga-etinye ọbá akwụkwọ ahụ na ndekọ aha.
Usoro 2: Anya C + 2012
Ngwa a na-agbakwụnye DLLs dị iche na kọmputa ahụ, gụnyere msvcr110. Ị ga-ebudata ma wụnye ya.
Download Microsoft Visual C ++ 2012 ngwugwu
N'otu oge na ibe maka nbudata, ị ga - achọ:
Họrọ asụsụ echichi dika Windows gị.
Pịa bọtịnụ "Download".
Ọzọ, ị ga-ahọrọ nhọrọ maka otu ikpe. Enwere uzo abuo - 32 na 64-bit. Iji chọpụta ikike digit nke kọmputa gị, mepee "Njirimara"site na ịpị "Kọmputa" pịa nri na desktọọpụ. Na windo nke meghere, ị ga-ahụ ozi dị mkpa.
Họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị.
Ọzọ, na-agba ọsọ.
Anyị kwenyere na ikikere ikikere.
DLL faịlụ abanye n'ime usoro ahụ ma mezie njehie ahụ.
Ọ ga-adị mkpa iburu n'uche ebe a na nchịkọta a tọhapụrụ mgbe mbipute 2015 nwere ike igbochi mbipute ochie ahụ na arụnyere. Mgbe ahụ, na-eme ihe "Ogwe njikwa", ị ga-ewepụ ha wee wụnye ya na 2015.
Usoro 3: Download msvcr110.dll
Iji dozie nsogbu ahụ na msvcr110.dll na-enweghị mmemme ọzọ, ị ga-achọ ibudata ya ma bugharịa ya na folda ahụ:
adabara gị ma ọ bụ dị ka e gosiri na mbiet ahụ:
Ụzọ nke nrụnye DLL nwere ike ịdị iche, ọ dabere na nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ yana ndị omimi ya. Dịka ọmụmaatụ, Windows 7 64-bit ga-achọ ụzọ dị iche karịa otu OS na x86 bit. Enwetakwu nkọwa gbasara etu na ebe ị ga-esi wụnye DLL ka edere ya n'isiokwu a. Iji chọpụta otú e si edeba faịlụ n'ụzọ ziri ezi, ị ga-agụ isiokwu anyị ọzọ. A chọrọ ọrụ a na ọnọdụ mberede, ọ naghị adị mkpa ime ya.